Raise Your Skillz - ဂိမ်းဆော့ခြင်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Passion ပါ။ 1985 ခုနှစ်ကတည်းက။
နောက်ထပ် FPS ဂိမ်းများ
ဂိမ်းဆော့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Passion ပါ။ 1985 ခုနှစ်ကတည်းက။
Pros ပေါင်း ၁၇၀၀ ကျော်ကထောက်ခံသည်
Epic နာမည်ပြောင် Generator
Mouse Sensitivity Converter (70+ FPS ဂိမ်းများ)
FPS ဂိမ်းများအားလုံး - အာရုံခံနိုင်စွမ်းပြောင်းစက်
Apex Legends Mouse Sensitivity Converter ပါ
Call of Duty (+Warzone) Mouse Sensitivity Converter ပါ
Fortnite Mouse Sensitivity Converter ပါ
Overwatch Mouse Sensitivity Converter ပါ
PUBG Mouse Sensitivity Converter ပါ
ဂိမ်းအတည်ပြုသူ – ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် ဂိမ်းတွင်း ဆက်တင်များ
ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ ပြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံ 35 နှစ်နှင့် Esports နှင့် အပြိုင်အဆိုင်ဂိမ်းကစားခြင်း အတွေ့အကြုံ 20 နှစ်ကျော်၊. ဒီတော့ အဲဒီလို အသိပညာနဲ့ ဘာလုပ်နိုင်မလဲ။ ကောင်းပြီ၊ အဲဒါကို မျှဝေပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ကို အာရုံစိုက်ပါ။ နာမည်ကြီး FPS ဂိမ်းများနေ့တိုင်းနီးပါး ကစားပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး၊ ရည်မှန်းချက်ကြီးသော၊ နှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂိမ်းကစားသူများကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း နက်ရှိုင်းသော ဆောင်းပါးအချို့ဖြင့် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါသည်။ Masakari.
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား အတိုချုံး မိတ်ဆက်ပြီးပါပြီ။ ဒီမှာ (Masakari) နှင့် ဒီမှာ (Flashback). Masakari အမြင့်ဆုံးအဆင့်တွင် Esports အတွေ့အကြုံ ကြီးမားသည်။ Flashback ယှဉ်ပြိုင်မှုအနည်းငယ်လည်း ကစားဖူးသော်လည်း Esports အဖွဲ့အစည်းများကို အဓိက ဦးဆောင်ခဲ့သည် (ထို့ထက်ပို၍ ကျွမ်းကျင်မှု မလုံလောက်ပါ :-P)။
ကျွန်ုပ်တို့သည် နှစ်ပေါင်း 70 ပေါင်းစပ်ထားသော ဂိမ်းအတွေ့အကြုံဖြင့် ရေးသားပြီး ရှာဖွေရန် သင့်ကို ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ သင်၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သို့မဟုတ် ဝါသနာအတွက် အချက်အလက် အမျိုးအစား4ခု.
"ဂိမ်း Gear"ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ကိရိယာများအတွက်အကြံပြုချက်များကိုသင့်အားယူသည်။ မည်သည့်အကြံပြုချက်များသည်အဓိကကစားသမား ၁၅၀၀ ကျော်၏ gaming gear ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုအခြေခံသည်။
ဒါဆိုရင်ငါတို့တွေအကြောင်းရေးမယ်”ကျွမ်းကျင်မှု“ မင်းကထိပ်ဆုံးကိုရောက်ဖို့လိုတယ်။ ၎င်းတို့တွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်သင်တိုးတက်သင့်သောနည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုများလည်းပါဝင်သည်။
စတုတ္ထအမျိုးအစားသည်သင့်အားကူညီရန်ကိရိယာအနည်းငယ်ပေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Mouse Sensitivity Converter ပါ ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်ဂိမ်း ၆၀ ကျော်အကြားအာရုံခံစားမှုကိုတွက်ချက်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
အဆိုပါ eDPI ဂဏန်းတွက်စက် မင်းရဲ့ setting တွေကို pros တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ချင်ရင်မင်းကိုကူညီလိမ့်မယ်။
ပျော်ရွှင်ပါစေ။ Raise Your Skillz .com
Andreas "MasakariMamerow [ယခင် Pro Gamer]
အတ္တ-သေနတ်ပစ်ဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုအနှစ် ၂၀ ကျော်အမြင့်ဆုံးအဆင့်တွင်ကစားခဲ့ပြီးသူ၏အသိပညာကိုသင်နှင့်မျှဝေသည်။ ဆက်ဖတ်ရန်…
ပြီးခဲ့သည့်အနှစ် ၂၀ အတွင်းနာမည်ကြီး Esport အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးထူးချွန်သောကစားသမားများကိုပံ့ပိုးရန်နှစ်သက်သည်။ ဆက်ဖတ်ရန်…
Amazon Associate RaiseYourSkillz.com သည်အရည်အချင်းပြည့် ၀ ယ်ယူမှုများမှရရှိသည်။ RaiseYourSkillz.com သည်အသွားအလာများနှင့်လုပ်ငန်းများကိုဤကုမ္ပဏီများအားရည်ညွှန်းသည်။
အကြောင်းအရာ Raise Your Skillz
© 2022 Raise Your Skillz •တည်ဆောက်ထားသည် GeneratePress
ပိုကောင်းတဲ့ကစားသမားဖြစ်ချင်လား။FPS ဂိမ်းများ (5) တွင် သင်ကျွမ်းကျင်ရန် လိုအပ်သော ထိပ်တန်း မက္ကင်းနစ် 2022 ခု